ရန်ကုန်မှာ သာမယ့် MRT | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » ရန်ကုန်မှာ သာမယ့် MRT	8
ရန်ကုန်မှာ သာမယ့် MRT
Posted by အောင် မိုးသူ on Apr 27, 2016 in Creative Writing, My Dear Diary | 8 comments
JICA က Youtube မှာ တင်ထားတာတွေ့လို့ပါ။ စီမံကိန်းလား ဘာလားတော့မသိ။ အဲ့လိုဖြစ်လာရင်တော့
သိပ်ကောင်းမှာပဲ။ တလောကတော့ ခုရန်ကုန်က ဂုံးကျော်တံတားအချို့ဟာ မိုးပျံလမ်းဆောက်ဖို့ မသင့်တော်လို့ ဖျက်ပေးရမယ်လို့
လည်း JICA ကပြောတယ်ဆိုလား ကြားမိပါရဲ့ ။ အိပ်မက်တွေ ဖြစ်လာတော့မှာလား။
Thint Aye Yeik says: အခု နက်လိုင်းတွေ ကျနေလို့… အဲဒါလေး ကြည့်လို့ ရဖို့ကို မလွယ်…
လိုင်းကောင်းမှ တစ်ခါ ပြန် လာ ဖွင့်ကြည့်မယ် သပ်လား။
ရန်ကုန် လမ်းတွေကို မိုးပျံလမ်းရှည်ကြီးတွေ ဆောက်မယ်ဆိုရင်…
ပထမဆုံး ဆောက်စေချင်တာက… အင်းစိန်လမ်းမ…. ဘတ်စ်ကားတွေ သောင်းကျန်းလွန်းလို့…
အဲ့လမ်းက ကားမောင်းရတိုင်း အာရုံတွေအတော်နောက်ပြီး.. စိတ်တိုစိတ်ပျက်ရလို့…
အောင် မိုးသူ says: အဲ့မှာ သူ့လမ်းကြော မြေပုံပြထားတယ်။
kai says: ဘယ်ကပိုက်ပိုက်နဲ့. .ဆောက်ကြမှာလည်းမသိ…။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1684
အောင် မိုးသူ says: မသိဘးလေ သူကြီးရဲ့ JICA You Tube မှာ တွေ့လို့ပါ။
လုံမလေးမွန်မွန် says: အွန်းလေ.. ကြားမိတယ်..
ပြည်လမ်းတောက်လျှောက် တံတားတွေအကုန် ပြန်ဖျက်ရမယ်ဆိုလား..
အောင် မိုးသူ says: အာ့လို ကြားမိတယ်။
အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် says: .ဂျပန်ကအလကားလုပ်ပေးမှာလား..ခိခိ